ကိုဆွေဝင်း အမှုတွင် တရားလိုကို စစ်ဆေးရန် ရှိသော်လည်း တရားလို၏ ကျန်းမာရေး အခြေအနေကြောင့် ရုံ? - Yangon Media Group
ကိုဆွေဝင်း အမှုတွင် တရားလိုကို စစ်ဆေးရန် ရှိသော်လည်း တရားလို၏ ကျန်းမာရေး အခြေအနေကြောင့် ရုံ?
မန္တလေး၊ ဇန်နဝါရီ ၂
Myanmar Now အယ်ဒီတာချုပ် ကိုဆွေဝင်း၏ (၁၄) ကြိမ်မြောက်ရုံးချိန်းကို မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး ချမ်းအေးသာစံမြို့နယ် ဒေးဝန်းအနောက်ရပ်ကွက် ကမ်းနားလမ်းအောက်လမ်းရှိ မဟာအောင်မြေမြို့နယ်တရားရုံး၌ ဇန်နဝါရီ ၂ ရက် နံနက် ၁ဝ နာရီက ပြုလုပ်ရာ တရားလိုကို စစ်ဆေးမည့်ရုံးချိန်းဖြစ် သော်လည်း တရားလို၏ကျန်းမာ ရေးအခြေအနေကြောင့် လာရောက် နိုင်ခြင်းမရှိသဖြင့် ရုံးချိန်းထပ်မံချိန်းဆိုထားကြောင်း သိရသည်။
”ဒီနေ့က တရားလို ကိုကျော်မျိုးရွှေကို စစ်ဆေးရမှာပါ။ ကိုကျော်မျိုးရွှေက ကျန်းမာရေးမကောင်းဘူး။ ထောင်ဆေးစာနဲ့လာတဲ့အတွက် ထပ်မံရုံးချိန်းလိုက်တာပါ”ဟု ကိုဆွေဝင်း၏ တရားလွှတ်တော်ရှေ့နေ ဦးမျိုးမင်းဇော်က ပြောကြားသည်။ (၁၅) ကြိမ်မြောက်ရုံးချိန်းကို ဇန်နဝါရီ ၁၆ ရက်တွင် မန္တလေးမြို့ ကမ်းနားအောက်လမ်းရှိ မဟာ အောင်မြေမြို့နယ်တရားရုံး၌ ချိန်းဆိုထားပြီး တရားလို ကိုကျော်မျိုး ရွှေအား စစ်ဆေးမည်ဖြစ်သည်။
ကလေးမြို့နယ် အတွင်း မိသားစုအလိုက် ဝင်ငွေတွက်ချက်နိုင်ရန် အိမ်မွေး တိရစ္ဆာန်စာရင်း စတင်ကောက
တရုတ်နိုင်ငံတွင် အလုပ်လုပ်ကိုင်ရန် လူ ၅၂ ဦးကို ခေါ်ဆောင်လာသူနှစ်ဦးအား ပြည်ပအလုပ်အကိုင် ဆ??
‘အဲဒီအချိန်မှာ အစ်မတို့အတွက် အားကိုးစရာဆိုလို့ ဘုရားရယ်၊ လေယာဉ်မှူးရယ်ပဲ ရှိတယ်’ ခင်လေးနွယ?
ပညာရေးဝန်ထမ်းများ ပါတီအဖွဲ့အစည်းများ၏ စည်းရုံးရေး လှုပ်ရှားမှုများတွင် ပါဝင်ဆောင်ရွက်ခြင်းမပြုရန် ညွှန်ကြားထား
အဝေးကြည့်မှန်ပြောင်းဆောက်လုပ်ရေးသည် ‘Aquaman 2’ တွင် သရုပ်ဆောင်မည့်အစီအစဉ်ကို ခြိမ်းခြောက်နေကြောင်း မင်းသားဂျက်ဆန်မိုမိုအာပြော